Sary : US Ambassy Madagsacar
Niasa tamina masoivoho amerikana miisa valo izy ankoatra izay ary efa nitana andraikitra ambony tao amin’ny Departemantam-panjakana ihany koa. Tao anatin’izany ny toeran’ny Mpanolontsaina voalohany tany amin’ny Masoivoho Amerikana tany New-Delhi tany Inde sy ny toeran’ny Lefitry ny Sekreteram-panjakana Amerikana misahana ny raharaha afrikana.
Ny Ambasadaoro Pelletier dia manana ny mari-pahaizana B.S.F.S. avy amin’ny Oniversiten’i Georgetown, ny mari-pahaizana momba ny fandalinana politika avy amin’ny Institut d’Etudes Politiques tao Paris any Frantsa, ary ny ny M.I.A. avy amin’ny Oniversiten’i Columbia.
Miisa 13 ireo mari-pankasitrahana avy amin’ny Depatermantam-panjakana Amerikana efa azony ary tao anatin’izany ny “Presidential Meritorious Service Award” sy ny “Linguist of the Year”.